School News – Nay Pyi Taw International Science academy
March 10, 2022News, School Activity, School Newsby NISA Admin
Home visit createsastrong bond between the parents and the school. Different questions are asked and answered during warm conversations, and hot tea . Parents get to know more about school, and teachers learn quitealot about students, their studies, and personality.
March 10, 2022News, School Newsby NISA Admin
နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွင် ကလေးများအတွက် ပြင်ပဗဟုသုတများကို လေ့လာနိုင်ဖို့ Nay Pyi Taw International Science Academy မှ Summer Program များကို ဖွင့်လှစ်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါကြောင်းလေးစားစွာအသိပေးအပ်ပါသည်။ မိဘများသည် ၎င်းတို့၏ကလေးများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Summer Program အစီအစဉ်သို့ စေလွှတ်ရန်ရွေးချယ်ရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှတစ်ခုမှာ အဆိုပါအတန်းများသည် ကျောင်းသားများအား ပညာရေးတွင် ရှေ့သို့တက်လှမ်းစေပြီး နောက်တစ်ဆင့်သို့ ခြေတစ်လှမ်းပိုမိုနီးကပ်စေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ နွေရာသီကျောင်းသည် ကျောင်းသားများ၏ အလုံးစုံ သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် ကျောင်းသားများအား မကြာခဏ အပြုသဘောဖြင့် တုံ့ပြန်နိုင်သည့် ပိုမိုစိတ်အေးလက်အေး သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ပေးပါသည်။ အောင်မြင်သောနွေရာသီကျောင်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုသည် ကျောင်းသားတစ်ဦး၏ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး ၎င်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ မျှော်လင့်ချက်များကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။ မိဘများ၏ကလေးအား အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော အစီအစဉ်တစ်ခုက စောင့်ကြိုနေပြီး ၎င်းတို့သုံးစွဲသည့်အချိန်များသည် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဟု အာမခံနိုင်ပါသည်။ Nay Pyi …
Applications are now open for 2022 enrolment at NayPyiTaw International Science Academy
Nay Pyi Taw International Science Academy အ​နေဖြင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပညာ သင်နှစ်အတွက် ​ကျောင်းအပ်လက်ခံ ​​နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။မိမိတို့၏ က​လေးများအတွက် တန်ဖိုးထား ဂရုစိုက်မှုများ နှင့် ကိုယ်ရည် ကိုယ်​သွေး ထူးချွန်မှုအား အဓိက အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု အ​နေဖြင့် ​ဆောင်ရွက်​ပေး​နေသည့် ​ကျောင်းအား ရှာ​ဖွေ​နေပါက NISA သည် သင့်က​လေးအတွက် မှန်ကန်​သော ​ကျောင်းတစ်​ကျောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ လှပ ​သော ​ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်အား စူးစမ်း​လေ့လာနိုင်ရန် တနလ်ာ​နေ့ မှ ​သောကြာ ​နေ့ အထိ မနက် ၉ နာရီ မှ ည​နေ ၄နာရီ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့ NISA မိသားစုများ နှင့် ​တွေ့ဆုံရန် ​​​မျှော်လင့်မိပါသည်။ အချို့​သော​အတန်းများသည် အကန့်အသတ်ရှိပါသဖြင့် အမြန်ဆုံးလာ​ရောက်အပ်နှံကြပါ​​နော်…… …………………………..#####………………………………… …
A New mini-football stadium
Hurray !!! To better serve NISA students ,teachers and staff , we started to buildanew mini-football stadium in international standards…It is projected to be completed by the end of summer holidays…One of the guiding principles of NISA education is ” cura personalis”, developing the whole person. Sports is an important element of that mission. By providing new facilities …